Xarakada Alshabaab oo maanta ka warbixisay waxyaabihii u qabsoomay tan iyo Markii la aas aasay (Warbixin) | Halganka Online
Xarakada Alshabaab oo maanta ka warbixisay waxyaabihii u qabsoomay tan iyo Markii la aas aasay (Warbixin)
Afhayeenka Xarakada Shabaabul mujaahidiin Sheekh Cali Maxamuud raage oo maanta shir jaraa’id ku qabtay gudaha Magaalada Muqdisho ayaa waxa uu warbaahinta u faah faahiyay kulamo mudooyinkii dambe gudaha dalka soomaaliya ay ku lahaayeen Hogaanka sare ee Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab,kuwaasi oo looga arinsanayay waxyaabihii uqabsoomay Xarakadaasi tan iyo intii la aas aasay.
Sheekh Cali Maxamuud raage ayaa waxa uu sheegay in mudada ay dhisan tahay Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab dalka ay ka hir galisay ku dhaqanka shareecada islaamka,islamarkaana ay soo nooleeyeen qaar ka tirsan Arkaanta islaamka oo fulinteedu ay ka gaabiyeen bulshada soomaaliyeed sida bixinta Zakawaadka.
Soo nooleynta Shareecada islaamka.
Sidoo kale Afhayeenka Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxa uu carabaayay in hadda gacantooda ay ku jiraan 10-gobol oo ka mid ah 18-ka gobol ee dalka soomaaliya,kuwaasi oo ay ka hir geliyeen Wilaayaad islaami oo dhaqan geliya Shareecada islaamka.
Waxuuna tilmaamay inay ku rajo wayn yihiin in Mustaqbalka dhow ay gacantooda soo gasho Sideedda gobol ee harsan si ay uga hir geliyaan ku dhaqanka Shareecada islaamka,isagoona xusay in Maamulada Puntland iyo Somali lanad ay yihiin Maamulo riddo ah oo aan waxba dhaamin dowladda kmg ah ee uu hogaamiyo Shariif Sheekh Axmed.
La dagaalanka Shirkiyaadka.
Sheekh Cali Maxamuud Raage “Sheekh Cali dheere” ayaa sidoo kale sheegay in waxyaabihii uqabsoomay ay ka mid yihiin Xamlo ay ku qaadeen Qubuuraha la barakaysto ee ku yaala gudaha dalka soomaaliya taasi oo ay ugu magac dareen “ Fa’sul Khaliil”,isagoona tibaaxay in Xamladaasi ay ku bur buriyeen Macbacyo la caabudi jiray oo ku yaalay gobolada kala duwan ee dalka soomaaliya.
Sheekh Cali dheere waxa uu intaa ku daray inay sidoo kale dalka soomaaliya ka fuliyeen Xukuno waafaqsan Shareecada islaamka kuwaasi oo lagu oogay dad dambiyo kala duwan ka galay Shareecada islaamka, waxaaana Xukunadaasi kamid ah Xaddul Xiraab,Qisaas,iyo tacziiro.
Ceyrinta Hey’adaha ajnabiga ah.
Shabaabul Mujaahidiin intii ay dhisnaayeen waxay sidoo kale dalka soomaaliya ka cayriyeen Hey’ado kala duwan oo isugu jiray Hey’ado dalka u joogay kirishtaamaynta Caruurta soomaaliyeed,Hey’ado sirdoon ah iyo sidoo kale Hey’ado gebi ahaanba kasoo horjeeday in Shacabka soomaaliyeed Horumar ay ka gaaraan tacbashada beeraha.
Wilaayaadka Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ee dalka soomaaliya ayaa iyagu noqday kuwii ugu badnaa ee qabtay howlaha muhiimka ah ee Xarakadaas,iyagoona Mubaacya-cooyin la galay beelaha soomaalida ah ee dega goboladaas,waxaanaXusid mudan in beelahaas hubkooda ay ku wareejiyeen wilaayaadka islaamiga ah si loogu difaaco Shareecada islaamka.
Dhanka kalena waxay hehsiisyo nabadeed iyo Musaalaxooyin dhex dhigeen beelo soomaali ah oo waqti dheer ay colaado lagu riiqday u dhexeeyeen.
Sameynta iyo dayactirka goobaha dunta guud.
Waxqabadkii ay qabteen Mujaahidiinta Alshabaab ayaa waxaa ka mid ah dhisidda wadooyinka isku xira gobolada dalka soomaaliya iyo sidoo kale sameynta buundooyin fara badan,waxayna sidoo kale gobolada dalka soomaaliya ka hir geliyeen goobo Caafimaad iyo goobo waxbarasho oo wax tar uleh shacabka soomaaliyeed.
Fikirkooda ku aadan Burcad badeedda.
Shabaabul Mujaahidiin waxay beeniyeen inuu jiro Xiriir kala dhaxeeya Kooxaha Burcad badeedda soomaalida ah ee Maraakiibta qafaasha,waxayna sheegeen inaysan raali ka noqon doonin Afduubka iyo qafaalashada doomaha shixnadaha ganacsi u sida ganacsatada soomaaliya.
Xiriirka ay la leeyihiin Mujaahidinta Caalamka.
Sheekh Maxamuud Raage Afhayeenka Mujaahidiinta Alshabaab wuxuu sheegay inuu xiriir wanaagsan kala dhaxeeyo Mujaahidiinta Caalamka ee dagaalada ka wada qeybo katirsan wadamada Islaamka,wuxuuna xusay in mabda’oodu yahay mid isku mid ah,isagoona hadalkiisa intaa kusii daray in gurmad iyo taageero xoogan ay ka heleen Mujaahidiinta Caalamka iyagana ay diyaar u yihiin inay u gurmadaan Mujaahidiinta Caalamka.
Ugu dambeyn Afhayeenka Shabaabul Mujaahidiin ayaa sheegay inay ka cudur daaranayaan wax kasta oo qala-daad ah oo dhinacooda ay galeen intii ay ku jireen Camalka Jihaahiga ah,isagoona Xusay in dhalinyarada ay yihiin dhalinyaro ku cusub Camalka Jihaadka balse ay baran doonaan,isagoona intaas ku daray in si looga hortago qala-daadkaas ay ka fureen Wilaayaadka kala duwan ee islaamiga ah Xafiisyo dacwo oo loogu talo galay in ay Shacabka dacwooyinkoodu geystaan.
Sheekh Cali Maxamuud Raage ayaa sidoo kale waxa uu ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay u istaagaan difaacidda iyo koryeelidda diinta Allah,islamarkaana la dagaalamaan Cadowga doonaya inay bur buriyaan ku dhaqanka Shareecada islaamka.
« Shariif Sheykh Axmed iyo Odayaal katirsan Beesha Mudulood oo is khilaafsan kadib xilka qaadis lagu sameeyay maareeyaha Dekadda Muqdisho. Xukun Qisaas ah oo galabta lagu fuliyay Askari katirsanaa Ciidanka Xisbada Wilaayada Islaamiga Gobolka Sh/Hoose »